Kaddib Jadon Sancho, Manchester United Oo U Dhaqaaqday Xiddigii Ay Ku Dagaallamayeen PSG, Chelsea, Real Madrid Iyo Arsenal - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKaddib Jadon Sancho, Manchester United Oo U Dhaqaaqday Xiddigii Ay Ku Dagaallamayeen PSG, Chelsea, Real Madrid Iyo Arsenal
Kaddib Jadon Sancho, Manchester United Oo U Dhaqaaqday Xiddigii Ay Ku Dagaallamayeen PSG, Chelsea, Real Madrid Iyo Arsenal
June 27, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga 0
Manchester United ayaa culayskeeda iskugu geynaysa sidii ay u heli lahayd xiddiga da’da yar ee khadka dhexe ee Eduardo Camavinga kaddib marka ay toddobaadkan dhamaystirto heshiiska xiddiga reer England ee Jadon Sancho oo la filayo in toddobaadkan lasoo gabogabeeyo.
Red Devils ayaa £77 milyan oo Gini kula soo wareegaysa Sancho iyadoo Borussia Dortmund iyo ciyaartoygaba ay heshiisyo la gaaadheen, waxaana kaliya hadhsan in heshiisyada si rasmi ah loo saxeexo.
Kaddib markii ay Manchester isku hubsatay Sancho, waxay u dhaqaaqday sidii ay u helilahayd ciyaartoy khadka dhexe ah, gaar ahaan kubbad-burburiye socon kara illaa goolka kooxda kale, kaas oo ay u dooratay Eduardo Camavinga.
Laacibkan reer France oo ay da’diisu tahay 18 jir, una ciyaara Rennes ayaa lagu tilmaamaa ciyaartoyda ugu wanaagsan qaaradda Yurub ee soo baxay, waxaanu xoogsaday booskiisa xulka France oo uu waliba u dhaliyey gool kulamadii saaxiibtinimo, inkasta oo Deschamps uu ka reebay liiska Euro.
Eduardo Camavinga ayay hore u raadinayeen kooxaha waaweyn ee Yurub ee Paris Saint-Germain, Chelsea iyo Real Madrid, sidoo kalena waxa xiisaheeda muujisay Arsenal.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa rumaysan in Eduardo Camavinga uu yahay beddelka dhabta ah ee Paul Pogba, kuna soo baxayo qaab ciyaareedka Premier League iyo midka kooxdiisaba.
Red Devils oo ka walaacsan heshiiska Paul Pogba oo aan wali saxeexin qandaraas xilli sannad kali ahi ka hadhsan yahay heshiiskiisa Old Trafford, ayaa waxa uu Solskjaer doonayaa inuu helo Eduardo Camavinga oo asal ahaan kasoo jeeda waddanka Angola ee qaaradda Afrika.